‘हामी अब ठगिनेवाला छैनौं'
Thu, Nov 23, 2017 बिहीबार, मंसिर ७, २०७४
भगीरथ अवस्थी मंगलवार, कात्तिक २८, २०७४ 1442 पटक पढिएको
हिउँद लागेसंगै धारामा पानी कम आउन थालेपछि मेलौलीमा पानी भर्न राखिएका भाँडाकुडा।
मेलौली(बैतडी): २०१६ सालमै सहायक मन्त्री भएर इतिहास रचेकी द्वारिकादेवी ठकुरानीको कर्मभूमी तल्लोसोराडबासीले अझै विभिन्न किसिमका समस्या झेलिरहेका छन्। बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा स्थान पाइसकेकी ठकुरानीको ठाउँको मूहार भने अझै फेरिएको छैन् । प्रत्येक निर्वाचनमा सोराडबासीका मागमा भिन्नता आउन सकेको छैन्।
नागरिकका आधारभूत कुराहरु राजनीतिक नेतृत्वले पूरा गर्न नसक्दा मतदाताले पुरानै माग दोहोर्याइरहेको मणिलेक माविका प्राचार्य देवदत्त कलौनी बताउँछन्। ‘तल्लोसोराड क्षेत्रलाई जहिले पनि नेताहरुले भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेका छन्,' उनले भने, ‘नागरिकका आधारभूत माग समेत पूरा गर्न सकेका छैनन्।'
सडक निर्माण कार्य थालेको ३४ बर्षपछि पाटन–पञ्चेश्वर सडकको चालू आर्थिक बर्षमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुँदैछ। ‘धुलाम्य भएपनि सडक पुग्दा केही सजिलो भएको छ । यसलाई प्राथमिकता साथ कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने नेतालाई भोट दिन्छौं'मेलौली ७ का ध्वजबहादुर चन्दले भने ‘अब हामी ठगिनेवाला छैनौं । उम्मेद्वारका बोली व्यवहार चिनिसकेका छौं । यो क्षेत्रको विकास गर्नेलाई भोट दिन्छौं।'
६ दशक अघि महिला नेतृत्व जन्माइसकेको ठाउँमा महिलाले अझै विभिन्न किसिमका समस्या झेलिरहेका छन्। आफूहरुका माग पूरा गर्नेलाई मात्रै भोट दिने मेलौली ७ की पानकी ओझाले बताइन् । ‘हाम्रो सोराड क्षेत्र कुनै कुरामा कम छैन् । जुन बेला महिलालाई बाहिर निस्किन मुस्किल हुन्थ्यो । त्यो बेला महिला नेतृत्व जन्माएको ठाउँ हो । तर पछि यो क्षेत्रको विकासमा कसैले चासोे दिएन्, उनले भनिन्, ‘हामीलाई विद्युत,खानेपानी, सडक सबै कुराको अभाव छ । हाम्रो अभाव परिपूर्ती गर्ने नेतालाई भोट दिन्छौं ।'
प्रत्येक हिउँदको खानेपानीको बिषयलाई लिएर गाउँघरमा झगडा हुने गरेको छ। ‘खानेपानीको लागि रातिको १, २ बजे ब्युँझेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । मेलौली नगरपालिका भईसक्दा समेत कुनै सुविधा प्राप्त भएको छैन् । हाम्रा समस्या समाधान गर्न चाँसो नदिने नेतालाई किन भोट दिने?'मेलौली १ की सरु नायकले भनिन्,‘नेताहरुले जहिले पनि हाम्रो मतको अवमूल्यन गरेका छन्। हाम्रा जनजिविकासंग जोडिएका मुद्दामा कहिले सोच्दैनन् ।'
तल्लोसोराड क्षेत्रको मुहार फेर्नका लागि सडक र विद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मेलौली १ का गंगासिंह नायकले बताए। उनले भने ‘हाम्रो यो क्षेत्र कृषिका लागि उर्वरभूमी छ। यहाँ सडक र विद्युतको व्यवस्था गर्न सके धेरै परिवर्तन आउँथ्यो। नेताहरु गाडीमा धुलो उडाउँदै झुटो आश्वासनका पोका लिएर आउँछन् । के गर्नु?'
पाटन–पञ्चेश्वर सडकको ट्रयाक खोल्न तीन दशक बढी लाग्नु राजनैतिक नेतृत्वको बेइमानी भएको स्थानीयबासी बताउँछन्। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका समस्या नेताहरुको प्राथमिकता नपर्दा स्थानीयबासीले विकास तथा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको मेलौली ७ का रमित ओझाले बताए ।
तल्लोसोराडमा पर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आएको धेरै बर्ष भइसकेको छ । तर अझै त्यो आयोजनाले गति लिएको छैन् । यो आयोजना निर्माण भएमा तल्लोसोराड मात्रै नभएर समग्र देशकै मुहार फेरिने मणिलेक माविका प्राचार्य देवदत्त कलौनीको ठम्याई छ। ‘बैतडीको तल्लोसोराड क्षेत्र प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर यसको समृद्धिमा राजनैतिक नेतृत्वको ध्यान जान सकेन्' उनले स्पष्ट पारे।
यो चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरुले तल्लोसोराडमा क्षेत्रमा सडकदेखि लिएर अन्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने चुनावी नारा दिएका छन्। तर उनीहरुका नाराप्रति स्वराडबासी विश्वस्त देखिएका छैनन्।
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ चुनाव विरोधी गतिविधि गर्ने ‘विप्लव’ कार्यकर्ता पक्राउ
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ पञ्चायतकालदेखि भुसाल र बोहोराको टक्कर
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ सुनसरीका एमाले उम्मेदवारको घरमा बम विष्फोट
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ 'कम्युनिस्ट शासन अधिनायकवादको पर्याय हो'
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ देशले सक्षम नेतृत्व नपाएको राजपाको निष्कर्ष (घोषणापत्रको पूर्णपाठ)
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ राजपा घोषणापत्र - 'विवाहयोग्य महिलालाई आधा तोला सुनको मङ्गलसुत्र'
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ प्रदेशको सीमांकन सच्याउने राजपाको घोषणा
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ राजपाको घोषणापत्र सार्वजनिक : जनकपुरलाई विश्व हिन्दु केन्द्र बनाउने
काठमाडौं- ५ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा 6578
भ्रष्टाचारका पाँच सय मुद्दा सर्वोच्चमा अड्किए 1212
प्रदेशमा तत्काल पाँच हजार कर्मचारी 13384
पहिलो चरण चुनाव : आज अन्तिम प्रचार 2355
कांग्रेसले गठबन्धन अझै कस्ने 9242
तीन वरिष्ठ सह-सचिव सचिवमा बढुवा 7541
कम्युनिस्टहरूको प्रणाली परिवर्तन 993
निर्वाचनमा भयको छायाँ 343
चुनावदेखि सावधान 921
चीनसँगको एउटा मात्र नाका चार दिन बन्द 1221
गोरखामा एक बोरा सुतली बम भेटियो (अपडेट) 4536
सडकमा भेटिएको बम सेनाले डिस्पोज गर्‍यो 888
निर्वाचन विरोधी एक शिक्षक पक्राउ 1043
निर्वाचन कार्यालयमै शक्तिशाली बम 2694
चरिकोटमा भेटिएको बम सेनाद्वारा निष्क्रिय 1255
एक महिनासम्‍म एनालगबाटै टिभी प्रसारण गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय 4982
भाइबर र ह्वाट्स एपमार्फत ठगी बढ्यो 5699
एनालग टीभी बन्द : ३० लाख ग्राहक प्रभावित 32673
बढ्यो टेलिकम र आईएसपीको व्यापार 1790
इन्टरनेट ब्यान्डविथमा मासिक २० करोड खर्च 3429
नेपाली ‘एप' ले बदल्दैछ जीवन 9475